लक्ष्मी बैंकले प्रस्ताव गर्यो बोनस, कति दिने भयो बोनस ? - Dainikee News::
लक्ष्मी बैंकले प्रस्ताव गर्यो बोनस, कति दिने भयो बोनस ?
काठमाडौं, पुस २६ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को कमाईबाट वितरण गर्ने बोनस शेयर घोषणा गरेको छ । बैकको पुस २५ मा बसेको संचालक समितिको २१० औं बैठकले गत आर्थिक बर्षको कमाईबाट सेयरधनीहरुलाई ८.५ प्रतिशत वोनस शेयर प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी कर प्रयोजनको लागि ०.४५ नगद लाभांशसमेत प्रस्ताव गरको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ०। दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
बैंकको हाल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित ८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ९२ करोड पाँच लाख पुग्नेछ ।
उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्विकृति तथा बैङ्कको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपश्चात् मात्र वितरण गरिनेछ । बोनसका लागि बैंकले बुक क्लोजका लागि पछि अलगै सूचना जारि गर्नेछ । बुक क्लोजको मितिसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्र बैंकको लाभांश पाउनेछन ।
गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रस्ताव गर्ने लक्ष्मी बैंक २२ औं वाणिज्य बैंक बनेको छ । यसभन्दा अगाडि कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, बैक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स बैंक, जनता बैंक, इन्भेष्टमेण्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबी बैंक, सानिमा बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एनआईसी एशिया र सिद्दार्थ बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस २६, २०७५ /Thursday, January 10th, 2019, 11:32 am